Angelbiss akabudirira kunyoresa chiratidzo muMalaysia
Munguva pfupi yapfuura, Angelbiss akabudirira kunyoresa mucherechedzo muMalaysia. Nekuti Angelbiss ndeye yakazvimirira yekutsvagisa uye yekuvandudza mhando iyo yakakomba uye ine mutoro, inotarisira uye inoremekedza zvakasikwa. Kuti tidzivirire dzakasiyana kodzero uye zvido zvevatengi vedu, uye chengetedza positiv ...Verenga zvimwe »
Technology Nha. 1-Kupfuura gumi nematanhatu patent kunyoreswa kweokisijeni concentrator uye yekukweva muchina Nha. 2-Iyo bhatiri repasi rose kusimudzira 5L Oxygen Concentrator inowana 93% Nha. 3-Bvunzo 5L okisijeni concentrator paTibet 15000ft inowana 93% Nha. 4- Rechargeable suction muchina pamusoro 3hours No.5-20psi mukuru pre ...Verenga zvimwe »
Post nguva: 08-06-2020
Munguva pfupi yapfuura, AngelBiss akawana maviri ekushandisa modhi patent inobvumidzwa neChinese Intellectual Property Office. Iwo matsva patent akawanikwa nguva ino anonyatsoratidza simba nekuvandudza kugona kweAngelBiss yekutsvaga nekusimudzira timu, uye inoita basa rakakosha mukuwedzera enhanci ...Verenga zvimwe »
2020 igore rakakosha, gore rino takawana zvinhu zvisingawanzoitika, COVID-19 yakatsvaira nyika, Kobe Bean Bryant akasiya nyika ino, kuratidzira kunopesana nechisimba kwakapera mumhirizhonga, sarudzo zhinji muUnited States, ...